WASHINGTON, DC (VOA Afaan Oromoo) — Hagayya sagalii fi kudhan bara 2017 doniin lama baqattoota fe’anii Somaaliyaa irraa eega ba’anii booda handaara galaana Yamantti eega dhiyaatanii booda imalatoota galaanatti naqanii deebi’uu isaanii jaarmayaan godaantoota addunyaa ykn IOM gabaasee ture. Irra heddduun godaantoota kanaa lammiwwan Itiyoophiyaa kaan immoo kan Somaaliyaa ta’uun ibsamee jira. Oromoota balaa kana […]
Gaafa agabuun dhufe Najiib Zannuun irraa Gaafa agabuun dhufe soorree beela baafnee, Garbuu nyaachifnee annaan mi’ii obaafnee, Isaa nama hin fakkaanne nama fakkeessinee, Gara laafina keenyaan qubsiifnee guddifne. Akka ilma keenyaatti leenjifnee erginee, Carraa laanneefii dorgoomee moo’atee Waa harka seeneefii erga kiisha guuttatee, Galata dagatuun jibbasaa ifatti baafate. Duraan ni callifne himuun nutti ulfaattee Gaafa […]
Hawaasa keenya Awuroppaa jirtaniif; Wayyaaneen hawaasni Oromoo Awuroppaa lakkoofsa namaatifi cimina jaarmayaatinis jabaachuu waan hubatteef xiyyeeffannaa cimaa gootee socho’aa jirti. Ji’oota sagalan darbe kana qofa qondaaloonni OPDO marroo 15 ol dhoksaan Awuroppaa dhufanii shira xaxaa turanii galuun beekamee jira. Amma ammoo ambaassadaroota Oromoo lama Awuroppaatti ramaddee jirti ( Margaa Baqaanaa- Sweden, Ewunatuu Bilaattaa- Belgium). Kumaa […]
This video was posted on August 12, 2017 – በኦሮሞ ሕዝብ ትግል ስም ቁማር የሚጫወቱ የወያኔ ተላላኪዎች በጋዜጠኛው ተጋለጡ
Arsii Lixaatti maanguddoon waggaa 107 dubartii umrii 33 fuudhan Yeroo baay’ee namni tokko erga dhalatee umrii dargaggummaa keessatti gaa’ila kan raawwatu. Darbee darbee ammoo sababa haala jireenyaa garagaraatin umrii maanguddummaa keessatti gaa’ila raawwachuun ni mul’ata. Wanti tibbana ta’e tokko ammoo edaa kunis ni jiraa kan nama jechisiisu. Godina Arsii Lixaa aanaa Shaashamanneetti maanguddoon waggaa 107 […]